प्रेस रिभ्यू : माधव नेपाल विशेष दूत, तुलसाले साग छाडेर किन गइन् कतार ?
> प्रेस रिभ्यू : माधव नेपाल विशेष दूत, तुलसाले साग छाडेर किन गइन् कतार ?
१९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०७:३९
काठमाडौं,१९ मंसिर। आज मङ्सिर १९ गते बिहीबार देशका प्रमुख राष्ट्रिय दैनिकहरुमा १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद सागका समाचारले प्राथमिकता पाएका छन् । त्यस्तै, सत्तारुढ नेकपाको सचिवालय बैठकदेखि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि समाचारहरु प्रकाशित छन् ।सीमा अतिक्रमणबारे वार्ता पहल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रुपमा भारत पठाउन लागेको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रहपछि नेपालले विशेष दूतका रुपमा दिल्ली जाने तयारी गरेका हुन् । तर भारतीय पक्षबाट जानकारी नआएकाले टुङ्गो नलागेको नेता नेपालले बताएको आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा समाचार छ । बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा नेपालले आफू भारत जान लागेको जानकारुी गराएका थिए ।
‘विवादीत सीमा क्षेत्रका बारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न तपाईं जानुस् भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यूको आग्रह थियो,’ नेपालले बैठकमा गरेको ब्रिफिङबारे एक सचिवालय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीसँग कात्तिक अन्तिमतिर भएको भेटमा यो विषय उठे पनि पछि थप छलफल हुन पाएन ।’ बैठककमा नेता नेपालले त्यतिखेल आफूले प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय हितका लागि आफू जस्तोसुकै काम गर्न तयार रहेको जवाफ दिएको बताएको कान्तिपुर दैनिकमा उल्लेख गरिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकमा ४४ जिल्लामा सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पारिएको ६ महिनाअघि बनेको आयोगको अध्ययनले देखाएको समाचार छ । सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लगिएको प्रमाण संकलन गरेको हो । ४४ जिल्लामा मात्रै पाँच सय बिघा अर्थात् झन्डै सात हजार रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको भेटाएको छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा निजीकरण गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले देशैभर हिनामिना भएका सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्न १३ जेठमा आयोग गठन गरेको थियो । छानबिनअघि आयोगले उजुरी आह्वान गर्दै सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो । स्रोतका अनुसार आयोगमा एक सय ७७ उजुरी परे । आयोगले त्यही उजुरीका आधारमा छानबिन थालेको थियो । सबैभन्दा धेरै सुनसरीको सर्दु जलाधार क्षेत्रमा ४२ बिघा अर्थात् पाँच सय ३२ रोपनी सरकारी जग्गा किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।पत्रिकामा मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बोर्ड परीक्षा बहिष्कार गरेको समाचार पनि प्रकाशित छ । सरकारले मेडिकल कलेज सञ्चालककै पक्षपोषण हुने गरी दुई शैक्षिक सत्रमा उठाएको बढी शुल्क मात्रै फिर्ता गर्ने सहमति गरेपछि विद्यार्थीहरू वार्षिक परीक्षा बहिष्कारमा उत्रिएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धनप्राप्त चितवन, युनिभर्सल, नेसनल र जानकी मेडिकल कलेजका पहिलो र दोस्रो वर्षका बिडिएस र नर्सिङका विद्यार्थीले बुधबारको परीक्षा बहिष्कार गरेका हुन् । यी कलेजका एमबिबिएस पहिलो र दोस्रो वर्षका विद्यार्थीले पनि बिहीबारदेखि तोकिएको परीक्षा बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । बुधबार चितवन मेडिकल कलेजका बिडिएस र नर्सिङका विद्यार्थीले परीक्षा बहिष्कार गर्दै प्रवेशपत्र जलाए ।